MACLUUMAADKA TARANKA BASSET HOUND DOG IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Basset Hound Dog iyo Sawiro
Basset Hounds — Buckle at 3 years iyo Bella the Basset puppy at 5 bilood jir— Xidh labku waa xoog badan yahay oo caqli badan yahay. Wuxuu furaa albaabka sibidhka kaligiis si uu guriga u soo galo. Bella haweeneydu wali waa cunug waxaan wali sugeynaa inaan aragno waxa ay noqoneyso. '
Basset Hound waa eey gaaban oo xoogaa culus. Madaxa waa weyn yahay oo si fiican ayaa loogu dheelitiraa iyada oo leh qalfoof wareegsan. Afku waa qoto dheer yahay oo culus yahay oo dhererkiisu ka weyn yahay ballaca caarada. Indhaha midabbada leh waxay leeyihiin muuqaal jilicsan, murugo leh iyaga oo waxyar la madoobaaday hawd caan ah. Bushimaha bushimaha midabkoodu madow yahay waxay leeyihiin duufaanno dabacsan oo qoyan dharabkooduna aad buu u muuqdaa. Maqaarku wuxuu u laalaadaa sidii laastik oo kale wuxuuna ku dhacaa laalaabka madaxa. Dhegaha jilicsan ayaa hoos loo dhigay oo aad bay u dheereeyaan dhulka. Ilkaha waaweyn waxay ku kulmaan ama maqas ama xitaa qaniinaan. Laabta ayaa ah mid aad u qoto dheer, kuna fidsan lugaha hore ee hore. Eyga gadaashiisa ayaa aad u buuxa oo wareegsan. Cagaha ayaa weyn. Waxaa laga yaabaa in la soo saaro qoyaan-biyoodka Koodhku waa cufan yahay, gaaban yahay, adag yahay oo dhalaalaya. Ma jiraan sharciyo ku saabsan midabka, laakiin badiyaa waa madow, cagaar, caddaan, casaan, ama caddaan leh calaamado midab leh oo midabkiisu yahay.
Basset Hound waa macaan, jilicsan, u heellan, nabdoon oo si dabiici ah u dhaqan wanaagsan. Waxay si fiican ugu habboon tahay nolosha qoyska. Dabeecaddiisu waa inay had iyo jeer noqotaa mid saaxiibtinimo leh, oo aan waligeedna noqon mid xun, mid xamaasad leh ama qallafsan, waxayna noqonaysaa oo keliya haddii milkiilayaashu eyda u horseedaan inay aaminaan inuu yahay hogaamiyaha xirmada aadanaha. Waa mid khafiif ah laakiin aan ka xishoonaynin sayidkiisa iyo saaxiibtinimada carruurta. Waxay noqon kartaa xoogaa madax adag leh milkiilayaasha qabow waxayna ubaahantahay milkiile shirkad leh, kalsooni leh, oo iswaafaqsan oo muujiya dabiici amar eyga . Eeyadu waxay u baahan yihiin inay ogaadaan xeerarka guriga oo aadamuhu ku dheganaado. Baasetku waxay jecel yihiin inay khiyaamo u sameeyaan cuntada. Waxay leeyihiin jilif muusiko qoto dheer. Guryeynta ayaa adag , laakiin waxay ku fiicnaadaan samir, tababar dabacsan. Tababbarka saxda ah, way adeecayaan, laakiin markay soo qaadaan ur xiisa leh, mararka qaarkood way adagtahay in la helo feejignaantooda, maadaama ay jecel yihiin inay raacaan sankooda oo xitaa laga yaabo inaysan maqal inaad dib ugu yeereyso. Kaliya u oggolow Basset-kaaga inuu ka baxo leedhka meelaha nabdoon.
Dhererka: Ragga 12 - 15 inji (30 - 38 cm) Dumarka 11 - 14 inji (28 - 36 cm)
Miisaanka: Ragga 50 - 65 rodol (23 - 29 kg) Dumarka 45 - 60 rodol (20 - 27 kg)
Ha ka badin eeyahaas maxaa yeelay culeyska dheeriga ah wuxuu culeys weyn saaraa lugaha iyo lafdhabarta. Meesha dhibaatada ka jirto waa suurogal suuxdin iyo aakhirka curyaannimo lugaha gaagaaban iyo jir culus oo dheer. Sida ay yihiin u nugul ubax , sidoo kale waa xikmad in la quudiyo laba ama saddex cunto yar maalintii halkii laga siin lahaa hal cunto oo weyn. Haddii ay cunaan cunno ballaaran isha ku hay dhowr saacadood mid kasta calaamadaha burooyin .
Basset Hound wax fiican kuma qaban doono guri dabaq ah. Iyagu gudaha kuma jiraan firfircoonaan laakiin banaanka waxay ku ordi doonaan saacado badan oo ciyaarta ah haddii fursad la siiyo. Way fiicnaan doonaan iyadoon deyr lahayn, laakiin waa in la siiyaa fursado badan oo ay ku ordaan oo ay ku ciyaaraan si ay u ahaadaan kuwo caafimaad qaba oo gooya.
Si Basset Hound caafimaad u ahaato, waa in la siiyaa jimicsi fara badan, oo ay ku jiraan a socod dheer maalin kasta si eygu maskax ahaan u ahaado mid deggan, laakiin ka niyad-jab in uu boodo oo culeys saaro lugaha hore. Noocani wuxuu socon doonaa oo ciyaari doonaa saacad marka fursad la siiyo. Sababtoo ah sankooda xiisaha leh waxay u muuqdaan inay meeraystaan ​​markay uriyaan. Ka taxaddar markaad ka baxdo sunta rasaasta in eygu ku sugan yahay aag ammaan ah. Markay caraf soo qaadaan xitaa ma maqli karaan adiga oo dib ugu yeeraya maaddaama diiradooda oo dhammaystiran ay noqon doonto sidii loo heli lahaa astaamaha dhinaca kale.
Celcelis ahaan 8 eeyo, qashin waaweyn ayaa caan ku ah inay ku leeyihiin 15 ama in ka badan eeyo yaryar hal qashin
Jaakad jilicsan oo gaaban, ayaa si fudud loo hagaajin karaa. Shanlo oo ku caday burush adag, shaambo oo keliya markii loo baahdo. Masax dhagaha hoostooda toddobaad kasta oo si joogto ah u jar cidiyaha cidiyaha. Tarankaani waa daadshe joogto ah.
Basset Hound waa nooc duug ah oo si toos ah uga farcamay Dhiigbax oo wuxuu leeyahay san in ku dhow sida ugu fiican. Xogta qaar waxay soo jeedineysaa in Basset Hound laga yaabo inuu asal ahaan ka soo jeedo eeyaha hiddo-wadaha ah ee ku dhashay qashinka noocyada kala duwan ee ugaarsiga ugaarsiga. Magaca 'Basset Hound' wuxuu ka yimid erayga Faransiiska 'bas' oo macnaheedu yahay hoose. Dhegaha Basset Hound dhagihiisa dhaadheer waxaa Shakespeare ku tilmaamay 'Dhegihiisa oo qaada dharab subax ah.' Noocyadan ayaa markii ugu horreysay lagu soo bandhigay carwada eyga ee Paris 1863, halkaas ayayna caan ku noqotay eeyga. Caannimadiisu waxay ku faaftay Ingriiska dagaallo ayaa si dhakhso leh uga dhex qarxay kuwa doonaya in eeygu noqdo eey badan oo muujinaya, oo u sii haya sida eeyga wehelka u ah, iyo kuwa doonaya inay u hayaan eey ugaarsi ah Noocani wuxuu ku faafay Ameerika halkaas oo ay ka soo baxeen kiciyeyaashu inay yeeshaan ey oo ay dareemeen inuu daboolayo ugaarsiga iyo astaamaha wehel / muuqaalba. Noocani waxaa aqoonsaday Naadiga Kennel-ka Mareykanka sanadkii 1885. Awood u leh inuu ugaarsado labada xirmo ama kaligiis, eeygu wuxuu ku fiican yahay ugaarsiga godka iyo meelaha banaan. Waxaa loo adeegsadaa in lagu ugaarsado dawacada, bakaylaha, opossum iyo baashaal. In kasta oo falcelinta eygu gaabis yahay, haddana waxay leedahay dareen ur wanaagsan. Xaqiiqda ah inay yara yaraatay cagihiisa waxay ka dhigan tahay inay sahlanaan karto ugaarsadayaasha cagaha ku socda. Waxay sidoo kale u egtahay inay cabsi galiso ciyaarta meel aan la gaari karin. Waxaa la sheegay in George Washington uu lahaa Basset Hounds oo uu siiyay Lafayette Kacaankii Mareykanka ka dib.
DaisyDuke & Roscoe eeyaha yaryar ee Basset Hound ee jira 15 toddobaad jir— 'Bassetts-keenayagu waa walaalo waxayna jecel yihiin guri kacsan markasta. Waxay jecel yihiin inay lugeeyaan & jecel yihiin inay isticmaalaan sankooda. Waxay maalintooda ku qaataan daawashada kuweenna riyaha xayawaanka . Waxaan jecel nahay Cesar Milan oo aan daawanaa isaga markasta! '
DaisyDuke & Roscoe eeyaha yaryar ee Basset Hound ee toddobaadyada 7 jira
Bella the Basset Hound markay tahay 2 1/2 sano jir— 'Bella waa Basset Hound-kayga cusub. Waxaan ahay milkiilkeedii 5aad muddo labo sano iyo badh ah. Ma fahmin sababta, waa eey aad u fiican. Fursad ayaan la qaatay si kasta oo ay tahay, runti uma aanan baahnayn eey kale. Aad baan u jeclahay iyada. Iyadu waa guri loo tababaray . Iyadu maya caadooyinka xun . Marka ha u oggolaan a taariikhda guryo badan oo hore maskaxdaada go aan ka gaadh marka korsashada eey . Fursad ayaan qaatay waana jeclahay iyada. '
'Tani waa Burcad. Waa 2 jir iyo Basset saafi ah. Wuxuu jecel yahay inuu ku ciyaaro oo ku ciyo xagxagto. Qof walba wuu jecelyahay waana caqli badanyahay kabahaygana albaabka ayuu dhigaa markuu rabo inuu baxo. Waa eey aad u faraxsan waana jeclahay isaga. '
Elwood the Basset Hound oo jira 5 sano
Ugu badnaan Basset Hound da'da 11 sano
ingiriiska bulldog iyo boston terrier
Sophiee dhalaanka saafiga ah ee Basset Hound eey 3 bilood jir ah
'Kani waa ku darista cusub ee qoyskeena. Kani waa Daisey Mae, Basset Hound-dhiig-buuxa. Halkan iyadu waa 8 toddobaad. Waxay jeceshahay qorraxda, socod dheer waxayna cuni doontaa cunno kasta sida tii ugu dambeysay. :) Aad baan u jecel nahay. Waxaan rajeyneynaa inaad adigana sameyso. :) '
Daadi madow Basset Hound qiyaastii 1½ sano jir
Eeg tusaalooyin badan oo ah Basset Hound
Sawirada Basset Hound 1
Basset Hound Dogs: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
waa waxa eey saluki a
cavalier king charles isku darka poodle
beagle bulldog mix buuxa koray
sawirada shil eyga